Governemanta Rango-pohy, Fanjakana « DSTapô » ! – MyDago.com aime Madagascar
Governemanta Rango-pohy, Fanjakana « DSTapô » !
Efa tery làlana ireo misora-tena ho « Fahefana Tetezamita (na FAT) ». Manantomotra, tsy azony ialana ny dinika iaraha-mamaha ny kirizy eo anatrehan’izao tontolo izao. Misarangodrangotra tsy te-hamotsotra ilay « hena an-tànan-tsaka » ny FAT.
Misarongatra amin’ny Rango-Pohy
Hosoka hisolokiana ny fankatoavan’ny Fianakaviambe iraisam-pirenena no tetiky ny FAT. Ilay fitondrana norombahany ihany no hatao tian-kano tsitian-kano amin’ny mpiray firenena. Efa lamokany tsy nahoan’izao tontolo izao ilay ki-referandômy 17 nôvambra. Ry kisarintsarin’antoko isany no nananganany 100 isam-bolana, nampanaoviny rango-pohy takalon-tseza, isandohana fa hoe izay ny fifaneken’ny ankolafy rehetra mahalamina ny firenena.
Mitsipatsipaka manapepo ny « FAT ». Tsy maintsy sakanana ireo ankolafy tsy manaiky fisolokiana ary milofo hanangana ny teteza-mita tena izy atao tenierana ifandaminan’ny ankolafy mpiray firenena. Avadika ho heloka be vava ny fijoroana ho amin’ny tetezamita tena izy. Samborina sy anamparan-kery izay tratran’ny « FAT ».
Eo no miditra an-tsehatra ny DST (CNME vaovao), arahan’ny FIS, ny milisin-dRamarosaona (Efa samy nasain’ny fianakaviambe iraisam-pirenena nofoanana ireo). Ny fitsarana moa efa baikoiny amin’izay ilainy.
Nofohazina hanangatra ilay CNME (Commission Nationale Mixte d’Enquête) tao Ambohibao, miaraka amin’ilay hoe « Borigady mpanao fisamborana » tamin’ny 2009. DST no anarany vaovao. Direction de la Sécurité du Territoire angaha hoe. Inona koa no fampandriana ny lafin-tanintsika eo?
Sekiriten’ny fari-tsezan’ny FAT
Izao no tsy mampandry ny lafin-tany nefa tsy re miditra an-tsehatra ity DST.
Ny miaramila vazaha tafiditra ato anatiny misalotra fanamiana sy ny galona ambonin’ny mpibaiko tafika tandroka aron’ny vozona. Ny nosintsika Juan de Nova sy ny harembeny efa avela tavanin’i Frantsa tsy ankiteniteny. Ny piraty jiolahin-tsambo Somalianina mandihindihy sahy manatona an’Antsiranana isan’andro. Ny dahalo mahazo mampihira kalakinikaovy manerana ny lafin-tanin’i Madagasikara hatrany an-tokotanin’ny pôlisy an-drenivohitra. Fa tsy hita nankany ity DST.
Satria raha mahakasika an-dRajoelina kosa hono ny DST no mankany hoy ity lehibeny.
Sekiriten-tsezan-dRajoelina mangozohozo tsy mahatanty adihevitra hanaovana tetezamita tena izy ary tsy mahita fankatoavana iraisam-pirenena: izany no sekirite anagidragidrana ny olo-marina. Ary Ambatobe sy Ambohitsorohitra: izay no « teritoara » na lafin-tany atao andrimaso.
Tsy misy sata ara-dalàna mazava ny DST ary tsy ao anatin’ny fandaminan-draharaham-pitsarana. Baiko sy toromarika politika misy sonia ofisialy voasonian’ny « Prezidansa » Ambohitsorohitra no arahan’ny DST (Kabinetra, sampan-draharaha serasera). Aelin’ny filazam-baovaom-pirenena izay ambany baikony eran’ny nosy, sy ny haino aman-jery fanana-manokan’ny filohan’ny FAT sy ny talen’ny seraserany ny heloka bevava hoforonina. Tondroiny anarana ny olona asaina enjehina. Lazainy izay hatao heloka bevava hanenjehana azy. Izay mampangorohoro ara-politika an’Ambohitsorohitra no ampangaina. Tefitefena atao petatoko ampidirana izao heloka miseho etsy sy eroa izao.
Miala any na tsy manana fahefana hanao izany aza ny polisy politika misambotra olona, mitazona olona, maka am-bavany. Tsy mpanao famotorana na voahosotra ara-pitsaranahanao izany ny polisy politika. Terena amin’ny daroka sy herinaratra izay babony hiaiky izay tadiaviny ary hitoroka izay tiany hotorohana araka ny toromarika azony.
Izany no fomba famadihan’ny polisy politika ny faharesena politikan’ny mpandromba-pahefana hanjary heloka bevava. Fanaon’ny polisy politika hatramin’ny nazia hitleriana izany.
Horohoron-tseza, meloka ny be vava, baomba politika, FAT halevin’ny tantara
Ireto ny rango-pohy tena rango-pohy vatofototry ny horohoron’ny FAT tapi-dàlan-kaleha:
Be vava, tsy manaiky ho voatampim-bava tsqy leon’ny FAT = heloka be vava
Ny fahafatesana politikan’ny Fat, tsy mahavanom-panjakana fa lamokany = fikasana hahafaty azy
Ny firosoan’ny mpiray firenena amin’ny tena tetezamita iaraha-manana, Goveernemanta Vonjimaika Tetezamita ho amin’ny Demokrasia, tena baomba politika mitatao tsy ho afany eo an-tampondohany = baomba kapoaka eny an-tsisin-dàlana.
Tetezamita = Rava ny fanjakan’iBaroa, tany tsy misy lalàna
Kirizy mitohy no dikan’ny DST, FIS, milisy. Tany tsisy fanjakana eto hatramin’ny 2009. Tany tsisy lalàna eto izao satria ilay FAT nisora-tena ho fanjakana mametraka ny tenany sy ny DST-ny, ny FIS-ny sy ny milisiny ambonin’ny fitsarana, mampiasa ny fitsarana amin’izay tadiaviny ary tsy fehezin’ny lalàna. Fandiavan-tongony ny zonao, ny zoko, ny zo’olombelona amam-palalahana fototra.
Amin’ny hitsiny ny fidrikinan’ny fianakaviambe iraisam-pirenena nampanafoana ny CNME, FIS, milisy raha mitohy amin’ny fanafoanana tsy misy hatakandro ny DST.
Amin’ny rariny ny sazy ampiharina amin’ny FAT sy ny forongony ary tsy maintsy hamafisina.
Ny teteza-mita ho amin’ny demokrasia = rava ny fanjakan’iBaroa + azo ny fankatoavana iraisam-pirenena.
Ampandresena 19 marsa 2011
Izany no lahatsoratra vaoarinay koa omeko anareo mpamaky eto.
Auteur Solo RazafyPublié le 20 mars 2011 20 mars 2011 Catégories Malagasy, Négos, Politique
1 pensée sur “Governemanta Rango-pohy, Fanjakana « DSTapô » !”
Tsy misy lazaina intsony fa efa vaoateny daholo!
Précédent Article précédent : Video Toko Be Telo, Magro 19/03/2011
Suivant Article suivant : 29 Marsa, GVTD no mendrika ny Tanindrazana